ईन्टरनेटमा वर्ल्डलिंकको कालाेबजारी : ग्राहक भन्छन्, ‘ठग कम्पनी, पैसा लिन्छ सेवा दिँदैन’ | Diyopost | Page 44670
मा प्रकाशित 9566 पटक हेरिएको
प्राविधिक समस्याका कारण तपाईंले खोज्नु भए अनुसारको समाचार लिंक उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । हामी प्रयासरत छौँ : धन्यवाद
काठमाडौं, माघ २० । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन प्रा.ली. ले सेवाग्राहीसँग विभिन्न सेवाको बहानामा ब्रम्हलुट मच्चाएको तथ्य खुलेको छ । वर्डलिंकले धेरै स्पीडको रकम लिएर कम स्पीडको ईन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । स्पीडमा मात्रै हैन सेवाग्राहीहरु विभिन्न वहानामा ठगिदै आएका छन् ।
वर्ल्डलिंकाे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि सेवाग्राहीले आफु ठगिएको भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् । कसैले धेरै स्पीडको रकम लिएर कम स्पीड मात्रै सुचारु भएको त कसैले ‘वार्निङ लेटर’ नै नपठाई कारबाहीमा समावेश गराएको गुनासो गरेका छन् ।
डोरिक यादव नाम भएका फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफूले वर्डलिङ्कको कर्मचारीसँग समस्याको गुनासो गरेको र कर्मचारीको व्यवहार राम्रो नभएको गुनासो गरेकोले पनि ईन्टरनेटको समस्या हल गर्न चासो नदेखाएको हुन सक्ने बताएका छन् ।
ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता रोहित शर्मा राउटर पनि काम नलाग्ने भएको बताउछन् । उनले १० मिटरको दुरीमा रहेको अर्को कोठामा समेत वाईफाईले काम नगर्ने बताउछन् ।
३० एमबीपीएसको ईन्टरनेट जोडेका केही व्यक्तिले ‘स्पीड टेष्ट’ गर्दा डाउनलोड १६ र अपलोड १० एमबीपीएस मात्रै देखाउनुले पनि वर्डलिंकले ग्राहकको लुट्ने बाटो ढुकेर बसेको प्रष्ट हुन्छ ।
सुवास साहीले नेट जोडेको सुरुको समयमा राम्रैसँग ईन्टरनेट चल्थ्यो । तर अहिले राउटर नजिकै बसेमात्र ईन्टरनेट चल्छ । उनी भन्छन्,‘खोई के गरेको हो यो वर्डलिंकले ?एकदम खत्तम लाग्यो मलाई त’
४० एमबीपीएसको ईन्टरनेट प्रयोगकर्ता साजन तामाङले आफ्नो दुखेसो यसरी व्यक्त गछन् ।
केसाङ डोलाकर, सुमन आचार्य लगायत यो ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताले पनि वर्डलिंकबाट सन्तुष्ट व्यक्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु वर्डलिंकले आफूहरुलाई ठगेको बताउछन् ।
दिपु लम्सालले २० को भनेर ५ एमबीपीएस स्पीड आफुलाई दिएको भन्दै वर्डलिंकप्रति आक्रोस व्यक्त गर्छन् । ६ महिनासम्म पनि आफ्नो समस्या समाधान नभएको भन्दै उनले आफूलाई वर्ल्डलिंक उल्लु बनाएको बताए । मेघराज तिमल्सेना पनि वर्डलिङबाट आफू ठगिएको बताउछन् ।
विर्तामोडका किरण पौडेलले पनि ५० एमबीपीएसको वर्डलिंक ईन्टरनेट जडान गरे । तर उनले वर्डलिंक राम्रोसँग नचलेपछि एनसेलको सहायता लिनुपर्यो । उनी भन्छन्,‘वर्डलिंकको सेवा मलाई मन परेन’
केही प्रयोगकर्ताहरुले आफूलाई विना सुविधा वर्डलिंकले भिखारी नै बनाउन लागेको बताएका छन् । केहीले यो कम्पनीको एप्समा पनि असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
अर्का प्रयोगकर्ता दिनेश कान्छा वर्डलिंकसँग सम्बन्ध विच्छेद नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउछन् । कम्पनीले भाउ बढाएको र प्लान चेन्ज गरेको भएपनि सेवा भने सन्तोषजनक नरहेको उनी बताउछन् । फेसबुकमाट उनले यस्तो असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
दाशराज शाक्यले सेवाप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै वर्डलिंकले स्लो प्वाईजन खाएर बौलाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पोक्चु लाक्पा पनि यो कम्पनीले दिएको सेवाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
बृहत श्रेष्ठले आफूले २० एमबीपीएसको सेवा कागजी रुपमा लिएको भएपनि स्पीड भने १ एमबीपीएसको भएको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । श्रेष्ठसँगै रोजिना सापकोटाले पनि वर्डलिंकले आफूहरुलाई ठगी गरेको बताएका छन् ।
अन्य विभिन्न सेवाग्राही तथा वर्डलिंकको ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताले पनि आफ्ना असन्तुष्टी सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल पारेका छन् । उनीहरुका गुनासा यस्ता छन् ।
धापासीको अर्बौंको जग्गा कौडीको भाउमा कब्जा गरेर मुख्यालय खोल्ने एनआईसी एसिया बैंकको तयारी !
‘किर्ते भौचर काण्ड’ मिलाउन अन्नपूर्ण मिडियाका मालिक रामेश्वर थापाका प्रतिनिधि पोखरामा
एनसेलले तिनुपर्ने ८५ अर्ब, उपेन्द्र महतो, निरज गोविन्द श्रेष्ठ र राजेन्द्र खेतानको फाइल खुल्ला !
अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेले नै गरे अख्तियारको दुरुपयोग : छोराकै पत्रिकामा छापियो विशेषांक
यस्तो पनि ‘स्मार्ट सिटी’ : हिलाम्य र धुलाम्य निलकण्ठ नगरपालिका (फोटो र भिडियो)
पत्रकारले तलब माग्दा एभिन्युजका मालिक भाष्कर राज राजकर्णिकारले धम्की दिएको खुलाशा
एनआईसी एशिया बैंकले करोडौँ सम्पत्ति ‘कब्जा’ गरेपछि ‘सुकुम्बासी’ बनेको एक दम्पत्तिको कहानी
धर्मगुरुको ‘ठगीधन्दा’ : बालतपस्वी उत्तम भट्ट(माहाराज)को जालमा यसरी परिन् नुवाकोटकी हुम कुमारी
बालुवा तस्करसँग कसले लिए कत्ति ? विवादमा तानिए पत्रकारदेखि नेता र मन्त्रीसमेत !
वाइडबडी प्रकरणमा बोल्ने कांग्रेस सांसदको सरकारी सुविधा खोसियो, सुरक्षाकर्मी र गाडी गृहद्धारा फिर्ता
प्रदेशका १२ भ्रष्ट मन्त्रीहरुः इन्धन वापतको पैसा लिँदै कुपनबाट तेल हाल्दै !
बैंकलाई ब्याजदर लचिलो बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीकाे आग्रह
सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक पोखरेलको सवारी दुर्घटना रहस्यमय भएको भन्दै परिवारजनद्वार छानबिनको माग
आफ्नो कार्यकारी शक्तिको प्रयोग गर्दै ट्रम्पद्वारा संकटकालको घोषणा
खानाको खोजीमा हिउँ भालु गाउँ पसेपछि… (भिडियो)